Fredrikstad (ku saabsan codka maqalka) (gargaarka · info); hore Frederiksstad, macnaha Fredrik's Town) waa magaalo iyo degmo ku yaal gobolka Østfold, Norway. Xarunta maamulka ee degmada waa magaalada Fredrikstad.
Magaalada Fredrikstad waxaa la asaasay sanadkii 1567, King Frederick II, waxaana loo asaasay degmada 1 January 1838 (fiiri formannskapsdistrikt). Degmada Glemmen ee magaalada Glemmen ayaa la jaanqaaday Fredrikstad 1dii Janaayo 1964. Degmooyinka baadiyaha ah ee Borge, Onsøy, Kråkerøy, iyo Rolvsøy ayaa ku biiray Fredrikstad 1dii Janaayo 1994.
Magaaladu waxay ku taallaa wabiga Glomma halkaas oo ay la kulmaan Skagerrak. Marka la barbardhigo Sarpsborg deriska, Fredrikstad waxay sameysaa magaalada shanaad ee ugu weyn Norway: Fredrikstad / Sarpsborg. Laga bilaabo 1 Janaayo 2018, sida ku cad Tirakoobka Norway, labadan degmo ayaa leh dad tiradoodu tahay 136,117 oo leh 80,977 oo ku yaal Fredrikstad iyo 55,140 oo ku yaal Sarpsborg.
Fredrikstad waxaa lagu dhisay Glomma afkiisa markii la bedelay ka dib markii Sarpsborg (15 kiiloomitir u jirta 9 mayl). Qaar ka mid ah muwaadiniintii way iska joogeen oo waxay dib u dhisteen magaaladooda waayadii hore waxayna ku heleen xaalada magaaladooda 1839.
Xarunta magaaladu waxay ku taal barta galbeedka ee Glomma, halka magaalada hore ee bangiga bariga waa magaalo-magaalo ku taalla Waqooyiga Yurub ee ugu fiican.
Fredrikstad waxa loo isticmaalay warshad baaxad weyn oo laga soo iibsaday, waxaanay ahayd meel muhiim u ah dhoofinta dhirta, ka dibna ka dib markabkii maraakiibta, illaa xannibaadkii ugu dambeeyay ee la xiray 1988-kii. Warshadaha waaweyni waxay hadda yihiin dhirta kiimikada ah iyo warshad kale oo fudud.
Sannadkii 2005, Fredrikstad waxay ahayd dekadda ugu dambeysa ee martigelinta 'Tall Tallaabada Ships', oo soo jiidatay kumanaan magaalo.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Fredrikstad&oldid=183238"
Last edited on 19 Oktoobar 2018, at 15:05